Ụlọ ọrụ n'ogbe 2021 Ụlọ na Azụmahịa N'ihi na Windows retail key office 2021 hb DVD ngwugwu Onye nrụpụta na onye na-ebubata ya |GK
Office 2021 na-enye ụzọ dị mma iji nweta ngwaọrụ gị site na ebe ọ bụla n'ụwa.Site na mbipụta Home & Business nke Office 2021 ị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma karịa ka ọ dị na mbụ:
Nhazi ọhụrụ, enwere ike ịnweta maka ngwa Office niile ọkacha mmasị gị.Nwee obi ụtọ na interface ahụ dabere na rịbọn wetara gị n'ìhè ọhụrụ, yana nkwado ọnọdụ gbara ọchịchịrị dị ike na ihe ndị ọzọ!
Enweghị ndenye aha achọrọ - site na otu ịzụrụ, ị ga-emeghe sọftụwia ọ bụla ị ga-achọ iji wuo ntọala ntụkwasị obi maka azụmahịa gị.
Jikọọ ma kesaa faịlụ gị n'ụzọ dị mfe.Office 2021 na-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe site na nhọrọ nkekọrịta na nnweta karịa ka ọ dị na mbụ.
Ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ bara uru ịnwale ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ihe ịga nke ọma n'ahịa asọmpi taa!Ịnata ngwa ndị a emelitere maka ụgwọ otu oge na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ahụmịhe kpochapụwo nke iji Okwu, Excel na PowerPoint yana ngwa ndị lekwasịrị anya azụmaahịa dị ka Outlook.
Ụlọ ọrụ Office 2021 na-abịa na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ ga-enyere aka ịchekwa oge mgbe ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ ihe ngosi gị na-esote - echefula ohere a!
Ụlọ ọrụ Office 2021 ụlọ na azụmahịa bụ ngwá ọrụ zuru oke maka azụmahịa ọ bụla kwesịrị ịnọ n'elu egwuregwu ha.Site na ọtụtụ atụmatụ na nhọrọ ọhụrụ, ngwa Microsoft gụnyere ga-eme ka ọfịs gị rụọ ọrụ nke ọma karịa ka ọ dịbu!
Atụmatụ Microsoft Word 2021
Ozi ịntanetị bụ ọkpụkpụ azụ nke azụmahịa na-aga nke ọma.Ị ga-enwe ike ịhụ ha nke ọma, ma nwee ohere ọbụlagodi mgbe ị na-aga!Outlook 2021 na-akwalite akụkụ niile nke ozi-e gụnyere nhazi, kọntaktị na mgbakwunye.Ọ dịịrị gị ma ọ bụ ọgbakọ gị mfe karịa ka ọ dị na mbụ iji Outlook 2021 dị nso ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ ibe gị.
Nke a bụ usoro opekempe chọrọ maka ịwụnye ụlọ a.Anyị na-akwado ịgafe ihe ndị a iji kwenye onwe gị ahụmịhe na-atọ ụtọ na Ụlọ & Azụmahịa Office 2021:
Nhazi: 1.6 GHz ma ọ bụ ngwa ngwa, 2-core processor.
diski ike: Opekempe nke 4GB ohere diski ike dị na harddrive nwụnye ka achọrọ.
Sistemụ nrụọrụ: Windows 10 ma ọ bụ Windows 11 achọrọ maka Office 2021.
Eserese: Ngwa ngwa ngwa ngwa eserese chọrọ DirectX 9 ma ọ bụ karịa, yana WDDM 2.0 ma ọ bụ karịa na Windows 10.
Nke gara aga: Ọnlaịnụ awa 24 dị njikere ịnyefe ozi email na-emeri igodo 10 Pro Windows 10 Pro Digital Key 64bit 32 Bit
Osote: Ụlọ Microsoft Office 2021 na nwa akwụkwọ (PC)